Maxamed Mursal oo kusoo baxay Kursi ka tirsan Golaha Shacabka iyo taageeradii Farmaajo oo.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Maxamed Mursal oo kusoo baxay Kursi ka tirsan Golaha Shacabka iyo taageeradii Farmaajo oo.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxamed Mursal oo kusoo baxay Kursi ka tirsan Golaha Shacabka iyo taageeradii Farmaajo oo..
Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa kusoo baxay Doorasho ka dhacay magaalada Baydhaba, isagoo helay codad aqbaliyad ah.
Guddoomiyihii Baarlamaanka 10-aad ayaa mar kale noqonaya Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka. Waxaana kursiga sumadiisu tahay HOP182 kula tartamay musharaxiinta kala ah:
1: Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo
2: Faysal Ibrahim
Waxay natiijadii codeyntu noqotay in Maxamed mursal sheikh Cabdiraxmaan Waxa uu helay 88 cod, halka Faysal Ibraahim aanu helin wa c cod ah, codadka halaabey ayaa gaaraya 12 cod.
Kursigan ayaa ka dhignaa in loo xiray Maxamed Mursal, kadib taageero weyn oo uu siiyey Madaxweynaha muddo xileedkiisu dammaaday ee Maxmaed C/llaahi Farmaajo.
Halkan ka khriso warbixinta aan ka qornay:
Previous articleGuddiga Heer Federaal oo joojiyey Doorashada Kursigii HOP#103 ee laga hor istaagay Prof. Jawaari
Next articleFarmaajo oo magacaabay Agaasimihii 8-aad ee Madaxtooyada Somaliya (Akhriso Liiska)
Akhriso: Magacyada iyo Beelaha Xildhibaanada ku fadhiya 21 kursi ee lagu dooranayo Dhuusamareeb
Hirshabelle oo shaacisay Doorashada 11 Kursi oo ka mida Golaha Shacabka (2 Kursi oo dib loo dhigay)
Guddiga Doorashada Galmudug oo ku dhawaaqay Kuraastii ugu badneyd ee la dooranayo (Akhriso Liiska)